प्रेमिकालाई नानाथरी भनेको भन्दै साथिको हत्या, सलमान खान पक्राउ — Motivatenews.Com
प्रेमिकालाई नानाथरी भनेको भन्दै साथिको हत्या, सलमान खान पक्राउ
काठमाडौं – भक्तपुरमा एक भारतीय नागरिकको हत्या भएको छ। उत्तरप्रदेश घर भई भक्तपुर नगरपालिका १ ईटापा बस्दै आएका ३५ वर्षीय शाहिव हुसैनको हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ।
उनको शव आइतबार बिहान पौने आठ बजे ईटापाको प्लानिङ नरकटघारी खोल्सामा फेला परेको थियो। शव फेला परेपछि महानगरीय प्रहरी परिसर, भक्तपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक तारादेवी थापाको कमान्डमा टोली खटिएको थियो।
हुसैनको टाउको र अनुहारमा चिन्न नसिकने गरी चोट लागेको थियो। पहिले उनको सनाखत भने भइसकेको थिएन। पछि प्रहरीले दुई वटा तालिम प्राप्त कुकुरको सहायतामा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
महानगरीय अपराध महाशाखा र परिसरको संयुक्त टोलीले अनुसन्धान गर्दा उनी सोही ठाउँको दुवाल मेटल कारखानमा पित्तलको भाँडा बनाउने काम गर्ने खुलेको थियो।
परिसरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीका अनुसार यस घटनामा संलग्न देखिएपछि उत्तरप्रेदशकै २३ वर्षीय सलमान खान र १९ वर्षीय सानु अन्सारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
उनीहरू दुवै जना हुसैनसँगै कारखानामा काम गर्थे। प्रहरीले उनीहरू दुवैलाई नियन्त्रमणमा लिई अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। अनुसन्धानकै क्रममा उनीहरूको कोठामा प्रहरीले खनतलासी गरेको थियो। जहाँबाट रगत लागेको लुगा र जुत्ता फेला परेको थियो।
प्रवक्ता गिरीका अनुसार उनीहरू तीनै जना शनिबार राति सँगै बसेर मादक पदार्थ सेवन गरेका थिए। मापसे गरी बेलुकी ९ बजे कारखाना फर्किने क्रममा नरकटघारी पुगेपछि सानु अन्सारीको प्रेमिकाको विषयमा शाहिव हुसैनसँग विवाद भएको थियो। हुसैनले प्रेमिकाको विषयमा अनुचित बोलेपछि झगडा भएको थियो।
‘प्रेमिकालाई कोठीमा पुर्‍याइदिन्छु भनेर अनेक भनेछन्, त्यसैले उनीहरूले हत्या गरे,’ प्रवक्ता गिरीले भने। सोही बेला खान र अन्सारीले हुसैनको अनुहार र टाउकोमा ढुंगाले हिर्काएका थिए। साथै उनीहरूले हत्या गरी उक्त शवलाई खोल्सालाई फालेर गएका थिए।
पोष्टमर्टमको लागि शव भक्तपुर अस्पतालमा राखिएको छ।
२०७७ कात्तिक १० गते प्रकाशित
चर्चित टेलिभिजन कार्यक्रम ‘सिधा कुरा जनतासँग’ बन्द हुँदै, यस्तो छ कारण
कहिले खुल्छ ड्राइभिङ लाइसेन्सको आवेदन ?
इलाममा भोलीदेखि एक हप्तासम्म लकडाउन हुने
निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने : उद्योग मन्त्री भट्ट
राजतन्त्रको पक्षमा वीरेन्द्रनगरमा प्रदर्शन
संघीय सरकारविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुगे प्रदेश २ का मन्त्री
राइटपाथले गर्यो सपनालाई सम्मान
पक्राउ पर्नुअघि रामचन्द्र पौडेलले यतिसम्म गरेका रहेछन्
कांग्रेस नेता पौडेल ३ घण्टापछि रिहा, रिहा लगत्तै सीडीओलाई दिए कडा चेतावनी
बिबाह गर्दै रमेश प्रसाईँ, यी हुनेवाला दुलही
मोटरसाइकललाई ठक्कर दिइ गाडी फरार, एकको मृत्यु
RBCL को १२० प्रतिशत लाभांश बीमा समितिबाट अस्वीकृत
फेरी बढ्यो सुनको मुल्य, कतिमा हुदैछ कारोबार ?
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुरक्षा थ्रेट
नेकपा सचिवालय बैंठकमा फेरी लफडा, ओली–दाहालबीच चर्काचर्की